Steem Power နှင့် SMTs ( Henry Aung ) — Steemit
Steem Power နှင့် SMTs ( Henry Aung )
kachinhenry (65) in myanmar •6months ago
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ၏ မျော်လင့်ချက် ဖြစ်သော Steem ဈေးသည် USD $ 0.9 ဝန်းကျင် တွင် ရောက်ရှိနေခဲ့သည်မှာ အတန်ကြာလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ပြောရလျင် ဤ အချိန်သည် Steem ဝယ်စုထားနိုင်လျင် အကောင်းဆုံ အချိန် ဖြစ်မည်မှန်းသိသော်လည်း မိမိ၏ အခြားစုထားသော coin များကလည်း ရောင်းရက်စရာမရှိပါ။
လက်ရှိ အခြေအနေအား cryptocurrency panic movement ဟု ခေါ်နေကြပါသည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ steemit platform ကတော့ဖြင့် မှန်မှန်ကြီး ရှေ့ဆက်လျက်ရှိပါသည်။ SMTs ထွက်ပေါ်လာမည် ရက်ကြေညာပြီးနောက် Steemit Platform ပေါ်တွင်အခြေခံကြမည့် SMTs များလည်း တခုပြီးတခု ထွက်ပေါ်လာနေကြပါပြီ။
APPICS ၏ XPA token , Hunt platform ၏ hunt token , Air Clinic ၏ airtoken အစရှိသဖြင့် တခုပြီး တခု ထွက်ပေါ်လာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်၏ ဆောင်းပါးများ တွင် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့သော အကြောင်းအရာတခုရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ " Steem ဈေး မတက်မှာ မပူပါနှင့် Steem ဈေးတက်လာလျင် မိမိတွင် လုံလောက်သော SP မရှိမှာကိုသာပူပါ " ဟူ၍ အကြိမ် ကြိမ် သတိပေးခဲ့ပါသည်။
ထို အချိန်တုန်းကတော့ အစ်ကို ဟင်က power up ပါ power up ပါ ဟူ၍ စည်းကမ်းတခုချမှတ်ကာ power up မလုပ်ချင် သော်လည်း ကြိတ်မိတ် ကာ power up ခဲ့ကြရပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ဤ Platform ပေါ်လျှောက်လှမ်းရာတွင် Member တို့အား လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများ အကြောင်းမဲ့ ထုတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ အချို့ကတော့ power up မလုပ်ချင်၍ သော်လည်း ကောင်း Power down ၍ ရှိသမျှ ရောင်းစားချင်၍ သော်လည်းကောင်း MSC မှ ထွက်သွားကြပါသည်။ သူ့အကြောင်းနှင့်သူ ရှိပါလိမ့်မည်။
ယခု ကျွန်တော် Steem power ၏ အရေးပါပုံအကြောင်း ပြောပြပါမည်။ Steemit ၏ အသက် ဖြစ်မည် ဖြစ်သော SMTs project များတွင် steemit platform ကဲ့သို့ပင် cureation reward system များ ပါလာကြပါလိမ့်မည်။ ဥပမာပြရလျင် ယခု သူများဆောင်းပါးအား vote ပေးလျင် ၂၅ % မိမိတို့ ပြန်ရသကဲ့သို့ SMTs များတွင်လည်း ထိုစနစ်များ ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ ၏ Steem Power သည် SMTs အားလုံးတွင် အကျိုးသက်ရောက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ မိမိတွင် ရှိသော SP ဖြင့် steemhunt.com ရှိ ကုန်ပစ္စည်း ကြေညာများ vote သွားလုပ်ပေးလျင် သူတို့ သတ်မှတ်ထားသော % အလိုက် hunt token ပြန်လည် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ hunt ကြေညာများတွင် Steem power ကို တိုက်ရိုက်ထား၍ vote ရယူနေကြရာ ဈေးကွက် ထွက်လာလျင် Steem ဈေးနှင့် မတိမ်းမယိမ်း အနေအထားတွင် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
ထို့အတူ hunt token သည် လက်ရှိ ဈေးကွက် ပေါ်သို့ မရောက်သေးပါ။ မကြာမှီ ဈေးကွက် ပေါ်သို့ ရောက်လည်း ပေါက်ဈေးအတိုင်း မိမိတို့အားလုံး အကျိုးရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အနည်း ငယ် ရှုပ်ထွေးသွားမည် ထင်ပါသည်။ ဆိုလို သည်မှာ Steemhunt သည် steemit ကို ပုံစံ တူ ယူထား သည် ဖြစ်ရာ သူတို့၏ ကြေညာ များအတွက် voting power လိုချင်သောကြောင့် Steem power ရှိသူတိုင်း အား Hunt token power air drop ဖြင့် အလကားချထားပေးပါသည်။
ဆိုရလျင် ကျွန်တော့ SP 11000 ကျော် ရှိသည့် အတွက် Hunt token လည်း 11000 ကျော်ရရှိပါသည်။ ထို Hunt token power ဖြင့် Steem Hunt မှ ကြေညာများကို vote ပေးခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်လည်း % အလိုက် Hunt token များ ရရှိနေပါသေးသည်။ ဤ နည်း ဖြင့် Hunt token များ ဈေးကွက် ပေါ် ရောက်လာသော အခါ မိမိတို့ SP အား power down ၍ ရောင်းစားစရာမလိုတော့ပါ ။ Hunt token ကဲ့သို့သော SMTs များကိုသာ ထုတ်ယူ ရောင်းစား၍ အကျိုး အမြတ်ယူ နေပါတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ steemit platform မှ ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သော SMTs တခု ဖြစ်သည့် steemhunt နှင့် Hunt token အကြောင်း ရှင်းပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ SMTs နည်းပညာ တရားဝင် လွင့်တင်လိုက်လျင် ဤ နည်းပညာအပေါ်တွင် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်သော steemhunt ကဲ့သို့သော project များ ရာနှင့်ချီ၍ စောင့်နေကြပါသည်။
ထို project တိုင်းတွင်လည်း သူနှင့် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ token များ ထွက်လာကြပါလိမ့်မည်။ ထိုထွက်လာကြသော token များကလည်း မိမိ တို့ SP ဖြင့် တိုက်ရိုက် အကျိုးများ မည် ဖြစ်ရာ မိမိတို့ Steem Power မည်မျှ အဖိုးတန်မည်ကို စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးသည့် အတိုင်း steemit platform ၏ အသက်သည် Steem power ဖြစ်ပါသည်။
ယုံကြည်၍ စုခဲ့ကြသူတို့ အကျိုးများပါလိမ့်မည်။ ဤ တွင် Member များအနေဖြင့် မေးစရာရှိလာပါသည်။ steemit platform မှ အခြားသော token များကို ထုတ်စေခြင်း သည် မူရင်း မိခင် ဖြစ်သော Steem token ဈေးကို ကျသွား စေပါမည်လောဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား တဖက်ကလည်း steemit ၏ SMTs project များသည် Steem ဈေးကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးရှိ စေမည်နည်း ဟူသော မေးခွန်းမှာ လူတိုင်းသိချင် နေသော မေးခွန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြောပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ MSC အစောပိုင်းကာလ များတွင် မိမိတို့ SP 25 သာရှိသေးသော အချိန်တွင် မိမိတို့ အလွန် အကျွံ vote & comments များ ပေးမိသောအခါ bandwidths limit exceed ဟူ၍ ဘားမှ ထပ်လုပ်မရသော အခြေ အနေမျိုး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ မိမိ ၏ 25 SP ပမာဏ အတိုင်းသာ vote & comment ပေးနိုင်း ခြင်းဖြစ်၍ ထိုထက် ပို လုပ်လိုလျင် SP တိုးယူရန်သာ ရှိပါသည်။
ယခုလည်း ထို အတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။ steemit Platform ပေါ်တွင် အခြေခံကြမည် ဖြစ်သော SMTs project များကလည်း သူတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်အား တနည်းအားဖြင့် ထို project ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ပမာဏ မှာ Steem power ဖြင့် ချိန်ညှိထားကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာပြပါမည်။ Steem hunt platform ၏ လက်ရှိ စွမ်းဆောင် နိုင်သော ပမာဏမှာ SP 1.4 သန်းတွင်ရှိပါသည်။
Steemhunt အားသုံးစွဲသူ မည်မျှ ရှိမည် တော့မသိပါ။ သို့သော် SP 1.4 သန်းတွင် အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါသည်။ ထို ရှိနေသော SP 1.4 သန်းမှာ steemhunt project မှဝယ်ယူထားသော Steem Power များမဟုတ်ပါ။ Steemit account များထံမှ delegates ယူထားသော Steem များ ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း Steemhunt platform သည် နာမည်ကြီးသွား၍ သော်လည်းကောင်း Hunt token ဈေးကွက် ပေါက်သွား၍ သော်လည်ကောင်း steemhunt သို့ အကောင့် အမြောက်အများ ဝင်ရောက်လာကြသောအခါ ထို platform ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်အားသည် SP 1.4 သန်းနှင့် မလောက်တော့ပါ။
ထိုအခါ SP မဖြစ်မနေ ဝယ်ထည့်ကြရပါတော့မည်။ သို့ မဟုတ် ထို platform ၏ နည်းပညာ အဆင့်မြင့်လိုက်လျင် ဖြစ်စေ နောက်ထပ် မြှင့်တင်လိုက်သော နည်းပညာ အတွက် လိုအပ်ချက်မှာလည်း Steem power သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တို့ အဘယ့် ကြောင့် SMTs ကို မျှော်နေကြသနည်းဟု ဆိုလျင် SMTs project များ ထွက်လာသည်နှင့် အမျှ ထို project များ၏ လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်းသည် Steemit ၏ Steem power ကို အခြေခံထားသည် ဖြစ်ရာ ထို အချိန်တွင် Steem ဈေးများ တက်လာကြမည်ကို သိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု steemhunt သည် SP 1.4 သန်းဖြင့် လည်ပတ်နေပါသည်။ Air Clinic ကတော့ မည်မျှ SP ရှိသည် မသိသေးပါ။ သေချာမလေ့လာရသေးပါ။ APPICS ကတော့ SP delegates လုပ်ကြရန် မတောင်းဆိုပါ။ လိုအပ်သော SP အတွက် ICO ခေါ်ပြီးသွားပြီး ဖြစ်၍ SMTs နည်းပညာ တရားဝင် လွင်တင်မည့် ရက်ကို စောင့်နေပါသည်။
ထို ICO တွင်လည်း Steem နှင့် SBD ဖြင့် APPICS ၏ XAP token များကို ဝယ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ မိမိကတော့ အလုပ်များနေသဖြင့် မမှီလိုက်ပါ။ SMTs project များသည် အနည်းဆုံး SP သိန်းကဏန်း သန်း ကဏန်းလိုအပ်မည် ဖြစ်ရာ project များ ရာနှင့်ချီလျင် SP မည်မျှ လိုအပ်မည်ကို မှန်းဆကြည့်ပါ။
Project Developers များ လိုအပ်သော SP ပမာဏ delegates လုပ်၍ မရလျင် ပြင်ပဈေးကွက်မှ Steem များ မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူကြရပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် Steem ဈေးတက်လာပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် steemit ၏ SMTs တရားဝင် လွင့်တင်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်တို့ MSC အတွင်းမှ လိုလိုချင်ချင် power up ခဲ့ကြသူများ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးဖြင့် power up ခဲ့ကြသူများအားလုံး မိမိတို့ SP ရှိသမျှ အကျိုးခံစားကြရပါလိမ့်မည်။
ထိုအချိန်တွင် အစ်ကိုဟင်၏ သတိပေးခဲ့မှုများ ၊ SP ရကြစေရန် အသနားခံ၍ နိုင်ငံခြားအကူအညီယူပြီး promotion ပေးခဲ့ခြင်းများအား ကျေးဇူးတင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့်ကတော့ မိမိတို့ SP စုနိုင်ရန် နောက် ၅ လသာ အချိန်ရှိပါတော့သည်ဟု ပြောလိုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Steem ဈေးတက်လေ SP စုရခက်လေ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Photo Credit : Original source Original source
myanmar steemit community courage smts
6 months ago by kachinhenry (65)
- Author $7.25
myothuzar (53) ·6months ago
ခုကစပြီး steemit ပေါ်ကtokensတွေအကြောင်းပါလိုက်လေ့လာပြီး ယူသင့်တာတွေယူထားရတော့မယ်။
kachinhenry (65) ·6months ago
အချိန်ကောင်းပါပဲ... မိမိရှိသလောက် SP နဲ့ ရသလောက်ယူထားပါ။
tharpauk (53) ·6months ago
အစ်ကိုရှင်းပြမှဘဲ နားလည်သွားတယ် steemhunt ဖွင့်သာဖွင့်ခဲ့တာ နားမလည်ဘူး ကျေးဇုးပါဗျာ
ကောင်းပါပြီ... steemit platform ကနေထွက်လာမဲ့ နောက် SMTs များ အကြောင်း ကောင်းနိုးရာရာ တွေကို အလျင်သင့်သလို ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
thatkozaw (57) ·6months ago
တချိန်​က eth လည်း ဒီလိုနဲ့​ဈေးတတ်​လာတာမို့လား အစ်​ကို
ဟုတ်ပါတယ်... steemit platform က Eth ထက် အများကြီး ပိုကောင်းမွန်ပါတယ်... မြန်ဆန်မှု ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား free ပြီတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုပမာဏ
Spစု ရတာ ရလေရလေ ပိုလိုချင်လေ ဖြစ်နေပြီ ကိုဟင်
ဒီလိုပဲလေ... အခုကတည်းက စု နေလည်း နောက်မကျသေးပါဘူး
domelay (61) ·6months ago
sp တွေ အများကြီး လိုချင်သေးတယ် ထပ်လဲ များများရဖို့ တတ်နိုင်သလောက်လေးကြိုးစားသွားပါဦးမည် ။
မိန်းမယူဖို့ SP စုနေတာတော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူး...
thettinaung (49) ·6months ago
ဝယ်ပြီးတောင် ပါဝါအပ်ချင်လာပြီ ကိုဟင်။ steemhunt အကြောင်း ပို့ စ်လေးတင်ပေး
ဖို့အကြံပြုပါရစေဗျ။
Steemhunt ကို ကိုစိုင်းနဲ့ ဒိုမီလေး တို့ ဆောင်းပါးရေးထာပါတယ် .... SP ကတော့ များလေကောင်းလေပါ။
donjaun (61) ·6months ago
nyinyiwin (61) ·6months ago
ကဲ အကိုဟင်ရှင်းမှပဲ လင်းတော့တယ် SMT အကြောင်း steem power SP က ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသွားပါပီ။ SP ကိုအခြေခံတဲ့ ပရောဂျက်တွေ ကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေပါ့မယ်။
တခုပြီးတခု ထွက်လာနေပါပြီ... ဆိုတော့ SMTs ကနေ ကျွန်တော်တို့ အကျိုးအမြတ်ရမဲ့ အချိန်လည်း မဝေးတော့ပါဘူး။
ဟုတ်​ကဲ့ပါ အကို​ရေ sp စုလျှက်​ပါ ☺ ☺
ဟုတ် ... မျှော်နေတာ ကြာနေပြီ။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် steem နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ token တွေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာရဦးမယ်၊တစ်ခုမှမသိသေးဘူး
ဟုတ် ဦးမင်း ... အကုန်လုံးကလည်း လေ့လာနေဆဲ အဆင့်ပါပဲ
komoezaw (60) ·6months ago
ရေးပါ ကိုမိုးဇော်ရေ.... အများကြီးနောက်မကျသေးပါဘူး။
Token ​တွေ တခုပီးတခု ထွက်​လာပီး sp ​တွေ ပို၍ အသုံးကျလာ​တော့မည်​ အ​နှေးနဲ့အမြန်​ ​ဈေးတတ်​​တော့မှာပဲ ဝယ်​စုနိုင်​သူ​တွေ စုထားသင့်​​သောအချိန်​ပဲ
ဝယ်စုတော့မယ်ပေါ့.... SP တွေများလာရင် vote ပေးအုံးနော်
At this time the steem price has dropped. And every day going to the bottom level.
Steemhunt and airclinic တွေတော့ လုပ်ထားပြီးပြီ။
SP များခြင်း အကျိုးပါ။
Byteball ကတော့ RP မြင့်ခြင်းကြောင့် အကျိုးပိုရှိ...
Steem အိပ်မက်တွေ ကောင်းကောင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တော့မည်ပေါ့....
သိပ်မကြာတော့ပါဘူး... SMTs တွေ ဈေးကွက် ဖွင့်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရထားတဲ့ token တွေ ချရောင်းနိုင်ပါပြီ။
moewaikamawet (49) ·6months ago
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Congratulations @kachinhenry! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
chitsone (50) ·6months ago
Sp စုမေစုမေ Go to sp 1000 ဆီ သို့ 😋😋😋😋